Instagram ayaa sii kordhaya ee ay caanka ee muddooyinkii dhowaa waxana la filayaa in ay noqon doonto in ka badan oo lagama maarmaan u ah ka hor doorta dadka iyo ganacsiga ee doonidiina u bixiyo ururkiisa image. Isticmaalka hal abuur videos la Instagram waxay noqon kartaa mid ka mid ah qalab weyn oo ka mid ah advertising kan keenaya su'aasha ah kuwaas oo ugu wanaagsan lacag la'aan ah barnaamijyadooda video oo loo adeegsado Instagram?
La hadal ee Instagram oo ay leeyihiin app video tafatirka u gaar ah in ay jirto u taagan ka mid ah kuwa ugu fiican. App oo keliya kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan shan iyo toban video labaad waxa ay sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan Montage ah halka ay awoodaan in ay codsan saamaynta qaar ka mid ah si ay video ka. Waa app oo lacag la'aan ah ayaa diyaar u ah labada isticmaala Android iyo macruufka. Waxaad u kala bixi karto Google ciyaari Store u android ama u sameeyaan dukaan Apple ay Gordhaw Kadhoofaan.
2. YouTube Ciidamada
App Tani waa hab YouTube ee sixiddiisa videos ee casriga ah iyo iyaga wadaagaan via Instagram ama wax kasta oo kale oo madal warbaahinta bulshada. Waxay leedahay astaamaha soo jireenka ah ee xasilinta image, soundtracks iyo awooda isku shaandheyn videos sida aad ku duubaan. Tani waa app kale oo lacag la'aan ah laga helayaa macruufka sidaas waa inaad u ka Apple Store ka soo dejisan kartaa.
Haddii aad raadinayso app ah in xaalkaa doonaa clips ka badan la degree ah lagu naalloon karo ee hufnaan? Waxaad ka heli kaliya hal! Iyadoo Vyclone aad waxba iigama kaliya awood u leh inuu milmaan xaglood in videos laakiin waxa kale oo aad awood u siinayaa in ay retouch aad cut u gaar ah. Waxaa laga heli karaa macruufka iyo Android telefoonada smart.
4. cut cute
Tani waa app ah haysta oo ah tifaftirayaasha caadi ah, laakiin ma aan style. Qalab ay qabno hub qarsoodi ah ku daray style in aad videos. Ka fakar wixii qalab Wehliyaha iyo kala guurka kuu sameyn karo. Sidoo kale miyaanan xusin in aad si toos ah u soo jiidi kara app this? Waa lacag la'aan ah laga helayaa macruufka.
App Tani la boosteejo ah oo samaynta guddiga sheeko dhex videos bixisaa macruufka isticmaala. Waxaa laga yaabaa inaad in ay toogtaan videos ka iPhone iyaga xaalkaa la app, ku dar gabay u badan tahay iyo waxaa aad leedahay sheeko fudud.
7. burayaa Waxaa
Tani waa app in uu si fiican u yaqaan for qabsaday darajo sare markii ay weheliso ay awooddeeda si ay u joojiyaan clips mooshinka la xawaaraha iyo saxsanaanta. Waxaa karnaa qaabab oo ah qaab FLV, MOV iyo MP4 tayada sawirka sare. Waxaad isticmaali kartaa app in ay jar aad videos, ku dar soundtracks oo ku dhajisan clips si aad u jiho kasta. Download this app qaab cajiib ah free Google Play iyo Apple Store
Sida Montaj, app si isku waslad weyn splice karaa multimedia aad dooratay. All u baahan si aad u samayso waa in aad doorato mawduucyada, music iyo saamaynta iyo app iyaga gabal doonaa wada idiin hab la yaab leh. Sida inta badan ay barnaamijyadooda video tafatir ku xusan, app this waa u bilaash labada telefoonada smart android iyo macruufka waa in aad soo qaado ka Google Play iyo Apple Store siday u kala horreeyaan.
Inkastoo app tani xadidayso users ugu badnaan 30 sec in boqortooyadii reer cajalado, weli waa qalab weyn in yimaado runtii anfacaya ee kalfadhi oo tafatir deg deg ah. Waxaad si fudud u abuuri karaan sida diirada caadadii la haynta software this maskaxda ku haysaa in aad sidoo kale ku dari kartaa music aan inta badan loo buunbuuninayo ah. Saraaxa, la viddy aadan u baahan inaad hantidaan wax xirfadaha video tafatir sida shuqulka oo dhan lagu sameeyo oo aad u. Waa sida aad u noqoto qaaddo quudin!
10. Game Your Video
Tani waa mid ka app Waxaan badan oo ay awood u leh saamaynta mooshin jecel. App ayaa sidoo kale caan ku abuuraya si fiican loo qeexay Isbadal audio aan lagu muujin xaqiiqda ah in uu saamaxaya kuwa isticmaala inay ciyaari badan videos. Waxaa kale oo u ogolaanaya screen kala ah. App waa waxtar u leh kuwa doonaya in ay ku biiraan, jar ama xataa beddeli videos ay. Download app this aad Iphone ka Apple Store ah.
> Resource > Apps > 10 Best Free Video Apps u Instagram